'Afọ ime,nke amakwa dịka 'ibu nwa n’afọ,bụ ogeotu nwa maọbụ karịa dị n’ime afọ nwaanyị. Inwekarị otu nwa nke akpọrọ ejima[]. Nwaanyị pụrụ ịdị ime mgbe ya na nwoke nweere mmekọahụmaọbụ mgbe eji nka n'ụzụ bekee mee ka okwe omume. Ọ na-anọ ihe ruru izu 40(ihe ruru ọnwa 10)mgbe nwaanyị hụsịrị nsọ ya ma nọgidezie ruo mgbe ọmụrụ nwa ahụ. Nke a bụ ihe dịka izu ụka 38nwaanyị tụụrụ ime. An embryo is the developing offspring during the first 8 weeks following conception after which the term fetus is used until birth. Ihe eji ama na nwaanyị atụrụla ime gụnyere ahụzighị nsọ ya, inwe obere ara,, agụụ ịgụ ya mgbe mgbe na ịnyụ mamịrị. A na aga n’ụlọọgwụ eme nchọpụta ma nwaanyị ọdị ime.
Oge afọ ime kere ụzọ atọ. Nke mbụbụ site n’otu izu ụka ruo izu ụka iri na abụọbụ mgbe atụụrụ ime. ịtụrụ ime n’esonye mgbe akwa nke si na mkpụrụ ndụ nwoke banyere n’oghere nke nọ nso n’akpa nwanke ga-ebidoghọọ obere nwa ọhụrụ[][]. N’oge a, ime n’apụkarị ụmụ nwaanyị[](nke na nwa ahụ nwere ike ịnwụ n’afọ) Ogo nke abụọ ya bụ nke n’esite n’izu ụka nke 13 ruo na nke 28. Mgbe ahụ ka ihe n’egosi na nwa dị n’ime akpa nwa ga-aputa ihe. N’izu ụka nke 28nke ụmụ ọhụrụ ga-enwe ike dị ndụ maọbụrụgodi na ha anọghị n’ime akpa nwa.Naanị maọbụrụ n’elezie ha anya nkeọma. Ogo nke atọ ya bụ site n’izu ụka nke 29 ruo nke 40.
↑ (17 December 2014) "Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.". Lancet. PMID 25530442.